နေမင်းက ဘာကြောင့်အဝါရောင်ဖြစ်နေတာလဲ - YOYARLAY Digital Media and News
နေမင်းက ဘာကြောင့် အဝါရောင်ဖြစ်နေတာလဲ…နေရဲ့အရောင်က ဘာလဲ? မဟုတ်ပါဘူး.. တကယ်တော့ အဝါရောင်မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းမှာ တွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို နေကဘာအရောင်လဲလို့ မေးကြည့်လိုက်ပါ။ အမေးခံရတဲ့သူက သင့်ကို ငကြောင်လို့ ထင်ပြီးကြည့်မှာ သေချာပါတယ်။ ပြီးရင် နေကအဝါရောင်လို့ သူဖြေမှာပါ။
နေရဲ့ အမှန်တကယ်အရောင်က အဝါရောင် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သင်အံ့ဩသွားမှာလား။ အမှန်တကယ်က နေရဲ့အရောင်က အဖြူရောင်ပါ။ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း ဒါမှမဟုတ် လပေါ်ကနေ နေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အရောင်အစစ်အမှန်ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အာကာသဓာတ်ပုံတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ရှာကြည့်လာပါ။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကနေ နေ့ဘက်အချိန်အတွင်းမှာ နေရဲ့အရောင်ဟာ အဝါရောင် ဒါမှမဟုတ် အရုဏ်တက်နေထွက်ချိန်နဲ့ နေဝင်ဆည်းဆာချိန်များမှာ နေရဲ့အရောင်ဟာ လိမ္မော်ရောင်ကနေ အနီရောင်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက လေထုဖိအားရဲ့ စစ်ထုတ်ခြင်းကနေတဆင့် ကျွန်တော်တို့ အနှစ်သက်ဆုံးကြယ်ကို မြင်ခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ အလင်းရောင်မှာ ရှိတဲ့ ပရိယာယ်ဆန်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက မြင်တဲ့ အရောင်ပုံစံကို ပြောင်းလဲခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို “မဖြစ်နိုင်သောအရောင်များ” လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
နေရောင်ခြည်ကို အလင်းပေါက်တဲ့ တြိဂံပုံတစ်ခုကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အလင်းရဲ့ လှိုင်းအလျား အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည် ရောင်စဉ်ရဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းရဲ့ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုတော့ သက်တံ့တွေထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်က အလင်းရောင် တစ်ရောင်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကြယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဒြပ်စင်တွေအားလုံးရဲ့ ရောင်စဉ်ထုတ်လွှတ်ခြင်း အပေါင်းအစုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်းအလျားအားလုံးက နေရဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့ အရောင်ဖြစ်တဲ့ အဖြူရောင်အလင်းအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ပေါင်းစပ်သွားပါတယ်။ နေက လှိုင်းအလျား အမျိုးမျိုးကို မတူညီတဲ့ ပမာဏတွေနဲ့ ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ တိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင် မြင်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ထုတ်လွှတ်တဲ့ ပမာဏက ရောင်စဉ်ရဲ့ အစိမ်းရောင်း အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ (အဝါရောင် မဟုတ်ပါဘူး။)
ဒါပေမဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ အလင်းရောင်က နေကနေ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဖြာထွက်တဲ့ ရောင်ခြည်တစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလင်းပိတ်ရောင်ခြည်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ နေရောင်ခြည် ရောင်စဉ်ရဲ့ ပုံမှန်စံနှုန်းရောင် နေရဲ့နဲ့ အခြားကြယ်များရဲ့ အပူချိန်ကို ညွှန်ပြတဲ့ အရောင်တစ်ရောင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမင်းကြီး အဖြူရောင်နီးပါးဖြစ်သလောက်ရှိတဲ့ ကယ်လ်ဗင် ၅၈ဝဝ ခန့် ပျမ်းမျှရှိပါတယ်။ ကောင်းကင်မှာ ရှိတဲ့ အလင်းလက်အတောက်ပဆုံး ကြယ်တွေကြောင့် Rigel ကြယ်ဟာ အပြာရောင်ပုံပေါ်နေပြီးတော့ တစ်သိန်း ကယ်လ်ဗင် ကျော်လွန်တဲ့ အပူချိန်ရှိပါတယ်။
Betelguese ကြယ်ကတော့ ၃၅ဝဝ ကယ်ဗင်လ် ရှိတဲ့ ပိုမိုအေးမြတဲ့ အပူချိန်နဲ့ အနီရောင်ပုံ ပေါ်နေပါတယ်။
လေထုဖိအားက နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရောင်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိစေသလဲ
လေထုဖိအားက အလင်းရောင်ကို ဖြန့်ကြဲပေးပြီး နေရဲ့ ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ အရောင်ကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။
ဒီသက်ရောက်မှုကို Rayleigh ဖြန့်ကြဲခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ခရမ်းရောင်နဲ့ အပြာရောင်အလင်းဟာ ပြန့်ကျဲသွားတာကြောင့် ပျမ်းမျှ မြင်နိုင်တဲ့ လှိုင်းအလျား သို့မဟုတ် နေရဲ့အရောင်ဟာ အနီရောင်ဘက်ကို ပြောင်းသွားပေမယ့် အလင်းရောင်က လုံးဝ မပျောက်ဆုံးသေးပါဘူး။ လေထုဖိအားထဲမှာ ရှိတဲ့ မော်လီကျူးများနဲ့ အလင်းရောင်ရဲ့ လှိုင်းအလျားတိုရဲ့ ဖြန့်ကျက်မှုက ကောင်းကင်ကို အပြာရောင်ဖြစ်စေပါတယ်။
အာရုဏ်တက်နေထွက်ချိန်နဲ့ နေဝင်ဆည်းဆာချိန်များမှာ လေထုဖိအားရဲ့ ပိုမိုထူထဲတဲ့ အလွှာကနေတဆင့် ကြည့်တဲ့အခါ နေက လိမ္မော်ရောင် ဒါမှမဟုတ် အနီရောင် ပိုသန်းတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ မွန်းတည့်ချိန် လေရဲ့ အပါးလွှာဆုံး အလွှာကနေတဆင့် ကြည့်ရင် နေရဲ့အရောင်အမှန် အနီးစပ်ဆုံးပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဝါရောင်သန်းနေဆဲပါပဲ။ မီးခိုးနဲ့ မြူတွေကလည်း အလင်းရောင်ကို ဖြန့်ကြဲသွားပြီး နေအရောင်ကို လိမ္မော်ရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင် ပိုမိုသန်းစေပုံ ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ နေဟာ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနဲ့ နီးကပ်တဲ့အချိန်မှာ အလားတူသက်ရောက်မှုက လကိုလည်း လိမ္မော်ရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင် ပိုမိုသန်းစေပုံပေါ်ပြီးတော့ နေဟာ ကောင်းကင်အမြင့်မှာ ရှိတဲ့အချိန်မှာ ပိုဝါပုံပေါ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ပိုဖြူတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။
နေရဲ့ ရုပ်ပုံတွေက ဘာကြောင့် အဝါရောင်ပုံပေါ်နေရတာလဲ?
နေရဲ့ NASA ပုံတစ်ပုံ ဒါမှမဟုတ် အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းတစ်ခုခုကနေ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ကြည့်လိုက်ရင် အများအားဖြင့် မမှန်ကန်တဲ့ အရောင်ကို တွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု ရှိတာကြောင့် ရုပ်ပုံအတွက် ရွေးချယ်တဲ့ အရောင်က အဝါရောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံ အစိမ်းရောင် အရောင်စစ်မှန်ပြားကနေတဆင့် ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူသားများရဲ့ မျက်လုံးများဟာ အစိမ်းရောင်အလင်းအပေါ်မှာ ထင်ဟပ်အတုံ့ပြန်အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ အသေးစိတ်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ႓ာဂြိုဟ်ကနေ နေကိုကြည့်ဖို့ ကြားနေသိပ်သည်းဆ အရောင်စစ်မှန်ပြားကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအတွက် အကာအကွယ်ပေးတဲ့ အရောင်စစ်မှန်ပြားတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ နေကြတ်ခြင်းကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ လှိုင်းအလျားကို မပြောင်းလဲဘဲနဲ့ သင့်မျက်လုံးဆီကို ရောက်ရှိတဲ့ အလင်းပမာဏကို လျှော့ချတာကြောင့် နေက အဝါရောင်ပုံပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ အာကာသထဲမှာ ဒီအရောင်စစ်မှန်ပြားကိုပဲ အသုံးပြုပြီး ရုပ်ပုံကို ပိုမိုလှပအောင် ပြုလုပ်လို့မရပါဘူး။ အဖြူရောင်နေမင်းကြီးကိုသာ သင်တွေ့မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref : Knowledge : Why Is the Sun Yellow?
Previous Previous post: အလုပ်နဲ့လက်တွေ့ဘဝ (Work and Life balance) ညီမျှအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
Next Next post: ချို့ယွင်းချက်ရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေ နားရွက်ဖန်တီးပေးခဲ့
နှစ်စဉ် မေလ (၁) ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့ဖြစ်ပြီး အစိုးရရုံး၊ အလုပ်ရုံ၊ ဈေးဆိုင်တွေကို ပိတ်ကာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အင်အားပြပွဲ၊ စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲ စတဲ့ အလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကို ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ Post Views: 3,581